Baarlamaanka Puntland oo xubinimadii ka qaaday guddoomiyihii hore Cabdixakiin Dhoobo-daareed - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandBaarlamaanka Puntland oo xubinimadii ka qaaday guddoomiyihii hore Cabdixakiin Dhoobo-daareed
December 10, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed oo loo yaqaan Dhoobo-daareed. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Xildhibaanada golaha baarlamaanka Puntland ayaa maanta oo Talaado u codeeyay mooshin ay xubinimada kaga qaadayaan guddoomiyihii hore ee baarlamaanka, iyagoo ku eedeeyay ku xad gudub dastuurka dowladda Puntland.
38 xildhibaan ayaa soo gudbiyay mooshinka xubinimada baarlamaanka looga qaadayay guddoomiyihii hore, sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil.
Kulanka oo ay fadhiyeen 40 xildhibaan ayaa 39 kamid ah ogolaadeen xubin ka qaadista, guddoomiyaha ayaa intaas ku daray.
Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed oo loo yaqaan Dhoobo-daareed ayaa baarlamaanka Puntland xilka ka qaadeen horaantii bishii November.
Ciidamada ammaanka DFS oo sheegay in ay soo afjareen weerar ay Al-Shabaab ku qaaday huteelka SYL ee Muqdisho
Garowe court sentences three men to death for raping and killing 12-year old girl
Garowe-(Puntland Mirror) A court in Garowe on Sunday sentenced three men to death penalty for raping and killing a 12-year old girl, Garowe court chairman Sheikh Abdinur said. The three men found guilty of raping [...]
Jubba Airways oo duulimaadyo cusub oo isku xiri doona dhowr magaalo ka bilowday garoonka diyaaradaha Boosaaso
Garoowe-(Puntland Mirror) Shirkada duulimaadka diyaaradaha ee Jubba Airways ayaa duulimaadyo cusub ka bilowday garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Boosaaso, sida ay sheegeen saraakiisha Jubba Airways shalay oo Axad ahayd. Duulimaadyada cusub ayaa isku xiri doona [...]